Cabdirisaaq Jurille iyo Maxamed Dheere Ayaa Dib Loogu Soo Celiyey Magaalada Jowhar
Buluugleey,Saturday, October 15, 2005
Guddoomiyaha Gobolka Shabeelaha Dhexe Maxamed Cumar Xabeeb (Maxamed Dheere) ayaa dib ugu soo noqday degmada Jowhar. Waxaa si ka gooniya isna ugu soo laabatay Jowhar C/Jjurille oo hogaaminaya wafdi kale, wafdigaan hadda kala socdey ayaa mar hore si wada jira ugu wada duulay dalka Ethiopia, iyagoo halkaas u tagay inay wada xaajood la soo yeeshaan Madaxda Dowladda Itoobiya. Safarka labadaas nin oo markii hore isku ujeedo ahaa ayaa hadda u muuqda inuusan isku ujeeddo ahayn.
Warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya halka ay dhab ahaan ka soo jeedo iney kala ujeedo noqdaan wafdigii israacay. Maxamed dheere ayaa daneynayey inuu Nairobi kula kulmo Prof. Geedi, waxaase loo soo duuliyey Godey oo dabadeed si toosa loogu soo celiyey degmada Jowhar, meesha Jurille loo ogolaaday inuu soo maro Nairobi.
Wararka qaar ayaa sheegaya in ay labada nin isku qoonsadeen siyaasada la xiriirta ujeedadii loo tegey Itoobiya oo u badneyd in dhaqaale Mareykanka looga helo la dagaalanka argagixisada iyo in ciidamo Itoobiyana oo hubeysan la soo geliyo Jowhar.
Wararka qaarna waxey sheegayaan in Maxamed Dheere oo la filayay inuu u duulo dalka Mareykanka marka uu dhameysto safarkiisa dalka Itoobiya aysan dhicin is daba mar iyo iska daba hadal ka dhexdhacay labadaas nin awgeed. si kastaba xaalku ha ahaadee waxaa muuqata in bixitaankaas uu ka taagan yahay khilaaf, sidaasna Maxamed Dheere uusan dhawaan ugu ambabixi doono dalka Mareykanka.
Waxaa la filayaa in marka uu soo gaaro Geedi magaalada Jowhar ay waxyaabo badan oo cabursan la filayo iney soo ifbaxaan. Jurille ayaa ah nin ka farsamo sareeya Maxamed Dheere, marka waxa la filayaa sida Geedi uu xurguftaas u xakameeyo ama uu u dheelitiro farsamada Jurille.